Wararka - Maxaa qalabka RPET caan u noqday?
Boorsada Maalinlaha ah
Bacda Garabka / Farriinta
Shandad / Laptop Sleeve
Biriishka / Gym Bag
Bacda Qalabyada Dijital ah
guriga / Wararka
Maxay waxyaabaha RPET u caan noqdeen?
765 Waxa daabacay maamulka Sep-22-2020
Waxaa jira macaamiil aad iyo aad u tiro badan oo ka imanaya Yurub oo u baahan boorsooyinka dhabarka iyo boorsooyinka laga sameeyo alaabada dib-u-warshadaynta. Ma jiraan wax wanaagsan oo loogu talagalay boorsooyinka dhabarka ku jira qalabka RPET?
RPET (Recycled Polyethylene Terephthalate) waa qalab dib loo isticmaali karo oo waara. RPET Fabric waa nooca ugu badan ee cusbada caaga ah. Waxaa laga sameeyaa dhalooyinka caagga ah (PET) ee dib loo warshadeeyay.
Dhalooyinka si farsamo ahaan ah ayaa loogu jajabiyaa jajab yaryar oo loo dhalaaliyaa in lagu duubo dunta. Ugu dambeyntiina, dunta ayaa lagu xardhay dharka polyester-ka dib loo warshadeeyay si loo abuuro badeecado casri ah, sida boorsooyinka dhabarka, dharka, kabaha.
Waxaa jira faa iidooyin qaar in la dul dhigo marada RPET ee alaabada cunaysa:
1.Waxay ka ilaalin kartaa caagagga inay aadaan qashin qubka iyo badda.
Waxaa jira tanno balaastik ah oo badda gala sannad kasta. Sida laga soo xigtay NGO Ocean Conservancy, 8 milyan oo metrik ton oo caag ah ayaa gala badda sannad kasta, dusheeda waxa lagu qiyaasaa 150 milyan oo metrik ton oo hadda ku wareega wareegga badda. Haddii aan socodkan ku sii soconno, sannadka 2050-ka waxaa badda dhexdeeda ku jiri doona caag ka badan kalluunka.
Waxaana jira caag badan oo u jeesta qashinka qashinka lagu daadiyo. Si loola macaamilo caagadan, dowlad kasta waa inay maalgashi badan gelisaa si loo wareejiyo, loo aaso ama loo gubo, taasoo saameyn ku yeelanaysa deegaankeena ilaa xad.
Haddii dib loo warshadeeyo dhammaan caagaggaas, waxay faa'iido u noqon lahayd dadka iyo kalluunka iyo deegaankeenna.
2.RPET waa ku dhowaad tayada sida polyester bikrad ah, laakiin waxay qaadataa tamar ka yar sidii loo sameyn lahaa.
Tirakoobyada ay muujiyeen Dharka 'Greener Fabrics': waxay horseed u yihiin soosaarayaasha dharka ku saleysan RPET oo tilmaamaya (marka la barbardhigo polyester bikrad ah)
85% tamar yar ayaa loo baahan yahay
65% qiiqa kayar: 50-65% kayar Carbon iyo Sulfur dioxide oo lasii daayay
90% biyo yari ayaa loo baahan yahay
3.RPET ilaa hadda ma ahan wax kaamil ah. Laakiin waxay dhiirigalin doontaa fikrado aad iyo aad u muhiim ah si dib loogu warshadeeyo waxyaabihii hore si ay u soo saaraan alaabo cusub oo aan maalin walba u isticmaalno. Markuu sii socdo, farsamooyinka dib-u-warshadaynta ayaa marba marka ka dambaysa la sii horumarin lahaa. Kuwaas oo dhan waxay gacan ka geysan doonaan yareynta qashinka dhulka sida ugu macquulsan, waxayna ka dhigayaan deegaankeenna wada noolaansho badan.
Ma u qalantaa in la iibsado bacaha jeermiska UV-ka?
0086-18205925267 0086- (0) 592-3665530 iibinta@hsbags.com Aaga Warshadaha Chengnan, Huian, Quanzhou, Fujian